घरमै बसौ, सन्तुलित आहार खाऔं, बाहिर भिडभाडमा नजाऔं : स्वास्थ्य प्रमुख सुवेदी - Pairavi Online
२०७७ जेठ ४ गते अाईतबार ११:३३ मा प्रकाशित
१२ महिना, २ दिन, ११ घन्टा अगाडि
२३५ जनाले हेरिएको
अहिले यो क्वारेन्टाइन शव्द एकदम सुनिन आएको छ । यो क्वारेन्टाइन भनेको के हो?
प्यूठान जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले क्वारेन्टाइन बनाएको र करिव २०० क्वारेन्टाइन शैया तयार भएको भन्ने समाचार प्रकाशमा आएको छ । क्वारेण्टाइनको शैया संख्या अझ बढाउनुपर्ने हो वा हामीलाई त्यति भए पुग्ने हो ?
पक्कै पनि हाम्रो प्यूठानका अधिकांश दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु कामको लागि भारत वा अन्य मुलुककमा जाने ट्रेण्ड अत्यन्त बढिरहेको छ । अहिले पछिल्लो समयमा भारतबाट जिल्लामा आउने प्यूठानी दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु उल्लेख्य रुपमा आउनुभएको छ । उहाँहरु सबै क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्छ भन्ने होइन । खासगरी हामीले टे«ेसिङ्ग गरेर जुन संख्या निकालेका छौं, जुन सबै गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय तहको नेतृत्वमा पहल भएको छ । त्यहाँबाट आएको तथ्यांकमा हाम्रो दैनिक रुपमा त्यस्ता कोभिड १९ सँग मिल्दा जुल्दा चिन्ह तथा लक्षण देखा परेका, जति पनि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचारमा आउनुभएको छ । उहाँहरुलाई हामीले कुन तहको सम्मलाई घरमै बसेर सेल्फ क्वारेन्टाइनको लागि सल्लाह दिने, कुन तहको लागि स्थानीय तह सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइनमा राख्ने र कुन तहको लागि त्यो भन्दा उच्चतम निकायमा पठाउनुपर्ने अथवाआइशोलेसनमै राख्नुपर्ने प्रवन्ध जुन निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको छ । त्यही अनुसार नै हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं । अहिलेको हिसावमास्थानीय सरकारहरु जागरुक भएर जुन संख्यामा क्वारेन्टाइन बनेका छन् अहिलेलाई यो संख्या प्रयाप्त छ । र पनि हामीले यो संख्या बढ्न सक्छ, थप संख्या हामीलाई चाहिन सक्छ भनेर हरेक वडास्तरमा हामीले लविङ्ग गरिरहेका छौं । विद्यालय, आमा समूहका भवन, बैठक सभाहल क्वारेन्टाइनको लागि हामीले सम्भावित ठाउँ पहिचान गर्ने काम पनि भइराखेको छ
क्वारेन्टाइन निर्माण तयारी हुँदै गर्दा तीनीहरुमा गुणस्तरीय तथा अत्यावश्यक सुविधा समेत छैनन् भन्ने समाचारहरु पनि प्रकाशमा आइरहेका छन् । अवस्था कस्तो हो ?
पक्कै पनि यो सबैको जिज्ञासा हुनसक्छ । गत चैत्र ११ गतेदेखि देश नै लकडाउनको अवस्थामा पुगेको छ । प्यूठान पनि पक्कै पनि लकडाउनकै अवस्थामा छ । भारतका विभिन्न शहरबाट नेपाल आउने नागरिकहरु पैदल यात्रा गरेरै भएपनि जिल्ला प्रवेश गरिराखेको अवस्था छ । हामीले यही चैतको १० गतेदेखि नै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा सरुमारानी गाउँपालिकाको वडा नं. २ मा स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गरेर प्यूठान र रोल्पा भित्र प्रवेश गर्ने यात्रुहरुको सामान्य स्वास्थ्य जाँच भाइरस संक्रमण सम्वन्धी परामर्श र १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरा परामर्श दिइएको थियो । पछि लकडाउनको अवस्थामा असाध्यै न्यून यात्रुहरुको प्रवेश भइरहेको हिसावले गत शुक्रवारदेखि हामीले हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्न त्यति सान्दर्भिक मानेनैं स्थानीय स्तरमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाबाट, जनप्रतिनिधिहरुबाट र अन्य सुरक्षाकर्मीको माध्यमबाट यो टे«सिङ्ग गर्ने कार्य भइरहेको छ । कहिलेसम्म हाम्रो लकडाउनको स्थिति रहला भन्ने जुन सवाल छ । यसबारे मैले अघि पनि भने यसको जिवाणु भाइरस शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसले रोगको लक्षण देखाउने अवधि भनेको १४ दिनको छ । त्यसो भएको कारण हाम्रो देशको अवस्था हेरेर लकडाउनको समय थप हुनेछ । यसमा सबै प्यूठानी दाजुभाई तथा दिदीवहिनीले आफ्नै लागि हो, हाम्रै लागि हो, हामी पनि बचौ र अरुलाई पनि बचाऔं भन्ने सन्देश दिदै सबै जना घरमै बस्नुहुनेछ । व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुहुनेछ ।
पक्कै पनि यो असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । सबभन्दा यस कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीको स्वास्थकर्मीको सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मी सबभन्दा पहिले जोखिममा पर्ने समूह पनि हो । र सँगसँगै सुरक्षाकर्मी लगायत अरु पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने जति पनि सहयोग कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरु अत्यन्तै जोखिममा हुनुहुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीको जोखिमलाई हामीले असाध्यै नजिकबाट हेरेका छौं । उहाँहरुको सुरक्षा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेका छौं । उहाँहरु सुरक्षित हुनुभयो भने बल्ल अरुलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ । रोग सर्ने जोखिम पनि कम गर्न सकिन्छ । विहीवार मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पर्सनल प्रोटेक्टीभ इक्युपमेण्ट मापदण्ड एउटा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा तीन चार वटा तहहरु छन् । त्यो तहको पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने ओपिडीमा खटिने परामर्श दिनेको पिपिइ कस्तो हुने ? दोश्रो चरणको चिकित्सको तहमा काम गर्नेको कस्तो हुनुपर्ने, त्यस्तै गरी रिफरल अस्पतालबाट रिफर गरिसकेपछि आइशोलेशन वार्डमा हुनुपर्ने कस्तो पिपिई, क्वारेन्टाइनको तहमा कस्तो पिपिई हुनुपर्ने, स्याम्पल निकाल्ने प्रयोगशालाकर्मी र जाँच गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको कस्तो खालको पिपिई हुनुपर्ने एउटा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । पक्कै पनि प्यूठान जिल्लाको सवालमा पिपिई अत्यन्तै कम मात्रमा पिपिई पाएका छौं । यो बजारमा स्वभाविक रुपमा किन्न पनि नपाइने, खासगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको मापदण्ड पुरा गरेर ल्याउनुपर्ने, त्यो भएको हुनाले हामीले त्यो खालको पिपिई हामीले असाध्यै कम मात्रामा उपलव्ध गराएका छौं शुक्रवार मात्र हामीले लगभग सबै स्थानीय तहलाई पुग्ने गरी एउटा दुईवटा स्थानीय तह बाहेक सबैलाई वहाँहरुकै पहलमा आएको छ । हामीले जानकारी पाएका छौं । त्यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेकै पिपिई छ । हामीले यहाँ अर्को कुरा पनि भन्नैपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा हामी आफैले उत्पादन गरेका, स्थानीय जुन टेलरहरु छन् ती टेलरहरुसँग समन्वय गरेर जुन हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने कपडाहरु छन् ती कपडाहरु साथसाथै बजारमा पाइने पलाष्टिकका थानहरु छन् ती लाई हामीे प्रशोधित गरेर यही स्थानीय स्तरबाट पनि हामीले एक खालको पिपिई उत्पादन गर्न शुरु गरिसकेका छौं र सम्वन्धित गाउँपालिकामा पठाउने काम जारी छ ।
कोरोना र कृषि
तिलोत्तमाका सबै सहायक नाका सिल